सावधान ! रातो साडी र लिपिस्टिक लगाएकी अनुहार सुन्दर छ, आकर्षक जीउडाल छ धेरैको घर बर्वाद पारेकी तपाईपनि होसियार हुन जरुरी – Khabar Patrika Np
सावधान ! रातो साडी र लिपिस्टिक लगाएकी अनुहार सुन्दर छ, आकर्षक जीउडाल छ धेरैको घर बर्वाद पारेकी तपाईपनि होसियार हुन जरुरी
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: १०:५५:१५
यी महिलाको विषयमा जानकारी पाएपछि मानिसको होस उड्छ। यी महिलाको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला निकै चर्चा छ। किनभने उनी दुई महिनादेखि फरार छिन् र कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सिकार बनाउन सक्छिन्। त्यही भएर मासिनहरुले सामाजिक संजालमा यो समाचारलाई शेयर गरेर मानिसलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्।
आज हामी यिनै सुन्दर देखिने तर खतरनाक महिलाका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। महिलाको नाम हो सपना। यी महिला राधे माँ की भक्त हुन्। अपराधको दुनियामा सपनाले सानै उमेरमा कदम राखेकी थिइन्। सपनाले अहिलेसम्म तीन जनासँग विवाह गरेकी छन् जसमा एकजना उनका भिनाजु पनि छन्।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार सपनाले आफ्ना श्रीमानमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमानलाई जेल बठाइयो। धेरै गुण्डासँग सपनाको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। सपना राति राति मानिसका घरमा सहयोग माग्न जाने र शिकार बनाउने गर्छिन्। सपनामाथि कयौं आपराधिक मुद्दा दायर गरिएको छ। उनी दुई महिनादेखि फरार छिन्।
प्रहरी र क्राइम ब्रांच दुवैले उनको खोजी गरिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार यी महिलाले गत मार्च महिनामा एयरपोर्ट रोडस्थित बिग बस रिजर्ट छत्तीसगढका जे श्रीनिवास पिता नरसिम्हा राव र उनका बुवा आदित्यलाई बन्धक बनाएर राखेकी थिइन्। श्रीमान कलेक्टर अफिस गोडामा नेशनल इन्फर्मेशन सेन्टरमा जिल्ला सूचना अधिकारी थिए। ओरिजिनल नबभारत टाइम्सबाट